1C အတွက် CONFIGURATION ကို UPDATE လုပ်နည်း - မည်သို့ဖြစ်စေ - 2019
Update ကို configuration ကို 1C
သင် installation ကိုအသစ်ဖြစ်ကြပြီးရုံအစွမ်းထက်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ် Sony က Vegas Pro ကနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရ စတင်. နေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်ဧကန်အမှန်အသင်သည်ဗီဒီယို၏ပြန်ကျော့မြန်နှုန်းကိုပြောင်းလဲဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကိုမဆိုမေးခွန်းများကိုရှိသည်။ ဤဆောင်းပါး၌ငါတို့သည်အပြည့်အဝနှင့်အသေးစိတ်တုံ့ပြန်မှုပေးဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျကို Sony Vegas မှာအရှိန်မြှသို့မဟုတ်နှေးပြကွက်ဗွီဒီယိုကိုရနိုင်သောနည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။
နှေးကွေးသို့မဟုတ် Sony က Vegas မှာဗီဒီယိုကအရှိန်မြှင့်ဖို့ကိုဘယ်လို
1. သင်အယ်ဒီတာသို့ဗီဒီယို download လုပ်ထားသောပြီးတာနဲ့ကို "Ctrl +" key ကိုနှိမ့်ချကျင်းပရန်နှင့်အချိန်ဇယားပေါ်ဗီဒီယိုအစွန်းဖို့ cursor ရွှေ့
2. အခုဆိုရင်ပဲဆန့်သို့မဟုတ်ချုံ့ဖိုင်, လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်နှိမ့်ချကိုင်ထားပါ။ ဤနည်းကိုသင် Sony က Vegas မှာဗီဒီယိုအမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။
ဤနည်းလမ်းကိုတချို့န့်အသတ်ရှိပါတယ်: သင်နှေးကွေးသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုပိုပြီး4ကြိမ်ထက်အရှိန်မြှင့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ထို့အပြင်ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်နှင့်အတူအပြောင်းအလဲများကြောင့်သတိပြုပါ။
1. အချိန်ဇယားထဲမှာဗီဒီယိုပေါ်မှာ Right-click နှိပ်ပြီး "Properties ကို ... " ( "Properties ကို") ကိုရွေးပါ။
2. က "ဗီဒီယိုကိုဖြစ်ရပ်များ" ( "ဗီဒီယို Event") အတွက်ပေါ်လာပြတင်းပေါက်၌ ( "ပြသမှုနှုန်းမှာ") "နှုန်း Play" ကို scroll ။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ထိုကြိမ်နှုန်းတဦးတည်းနှင့်ညီမျှသည်။ သင်ဤတန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အရှင်အရှိန်မြှင့်သို့မဟုတ် Sony ကဂတ်စ် 13 ဗီဒီယိုနှေးကွေးနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ယခင်နည်းလမ်း၌ရှိသကဲ့သို့, ဗီဒီယိုအရှိန်မြှင့်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည်ထက်4ဆနှေးကွေးလို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းနဲ့မတူပဲအရှင်ဖိုင်ပြောင်းလဲနေတဲ့အသံမပြောင်းလဲဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
1. အချိန်ဇယားထဲမှာဗီဒီယိုပေါ်မှာ Right-click ( "Insert / စာအိတ် Remove") "Insert / စာအိတ်ဖယ်ရှားပစ်" ကိုရွေးချယ် - "အရှိန်" ( "နှုန်း") ။
2. အခုတော့ဗီဒီယိုပေါ်တွင်အစိမ်းရောင်လိုင်းသည်ထင်ရှား။ , double-ကိုနှိပ်ခြင်းအားလက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်, သင် cue အချက်များကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်သူတို့ကိုရွှေ့နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါပိုမိုမြင့်မားအမှတ်, အသန်စွမ်းသောဗီဒီယိုအရှိန်တံ့။ သင်တို့သည်လည်းပါ0င်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတန်ဖိုးများသော့ချက်အချက်ကျဆင်းနေ, ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်ဗီဒီယိုပြဇာတ်စေနိုင်သည်။
နောက်ပြန်ဗီဒီယိုအား play လုပ်နည်း
ဗီဒီယို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနောက်ပြန်သွားစေဖို့ကိုဘယ်လို, ငါတို့အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားပြန်လည်သုံးသပ်ပါပြီ။ သင်တို့မူကားဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းပြန်လှန်ဖို့လိုအပ်ဘယ်သို့လျှင်?
1. Make ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်သွားကြဖို့ဗွီဒီယိုတစ်ခုကအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ဗွီဒီယိုကိုပေါ်မှာ Right-click နှိပ်ပြီး "နောက်ပြန်" ကိုရွေးချယ်ပါ
ဒါကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့ဗီဒီယိုအရှိန်မြှင့်သို့မဟုတ် Sony က Vegas မှာတစ်ဦးကျဆင်းမှုလုပျနိုငျနည်းလမ်းအနည်းငယ်မှာကြည့်ရှုလျက်, ကိုလည်းနောက်ပြန်ဗီဒီယိုတစ်ကားကို run ဖို့ဘယ်လိုသင်ယူခဲ့တယ်။ မျှော်လင့်ဤဆောင်းပါးကိုကိုသင်အသုံးဝင်သောဖြစ်လာသည်နှင့်သင်ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဆက်လက်။
ဗီဒီယို Watch: How to update BIOS settings. Update BIOS settings (စက်တင်ဘာလ 2019).